Tag: mushandi we mobile | Martech Zone
Tag: mushandi wekufambisa
Chipiri, August 2, 2011 Chipiri, Gunyana 4, 2012 Douglas Karr
Na2012, Morgan Stanley anofungidzira kuti mafoni anotumirwa achadarika makomputa anotumirwa. Uye zvakare, zvinotarisirwa kuti 25% yeese online e-commerce ichaitwa kuburikidza nefoni nhare. Zvakatofungidzirwa kuti makumi matatu kubva muzana emaimeri emakambani anoverengwa panharembozha. Kunyangwe vezvenhau vachiita senge vanotungamira nyaya zhinji… nhare inofanirwa kuve pamusoro nepfungwa nemakambani ese. Asi makambani haafanire kungotarisa nharembozha kubva pakushambadzira,